हतारमा कन्डम प्रयोग गर्दा के जोखिम हुन्छ ? - News from Nepal
हतारमा कन्डम प्रयोग गर्दा के जोखिम हुन्छ ? कन्डम च्यातिने वा फुट्ने सम्भावना कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
यौन सम्पर्कपछि शुक्रकीट र डिम्बको सफल मिलनपछि गर्भ रहने हो। कन्डमको उचित प्रयोगपछि शुक्रकीटलाई योनिद्वार एवं योनिको माथिल्लो भागमा स्खलन हुन नदिने हुनाले गर्भनिरोधक साधनमध्ये कन्डम पनि एक उपयुक्त साधन हो। हतारमा आकस्मिक रूपमा यौन सम्पर्क राख्ने क्रममा गर्भ नरहोस् भन्नका लागि कन्डम प्रयोग गर्ने गरिने भए पनि एचआईभी एड्स अनि अन्य यौन रोग नलागोस् भन्नका लागि कन्डम प्रयोग गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो। एचआईभीको महामारीसँगै कन्डमको महत्त्व पुनः बढेको छ। त्यसैले पनि जतिसुकै हतार भए पनि परिस्थितिअनुरूप कन्डम प्रयोग गर्न अल्छी मान्नु हुँदैन। त्यसै गरी, व्यावसायिक यौनकर्मीसँग यौनसम्पर्क राख्दा मात्र कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा पनि छ। कतिपय पुरुष अर्थात् किशोर आवेशमा कन्डम प्रयोग नगरी कतै एचआईभी र यौन रोग पो लाग्यो कि भनेर तारन्तार रगत जँचाउने गर्छन्। कतिपय त यौन रोग लाग्यो कि भन्ने आशंकामा मानसिक समस्याबाट प्रताडित हुने गरेका छन्।
कन्डमको सही प्रयोगका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यौनका मामिलामा खुलापन नभएको नेपाली समाजममा कन्डमको प्रयोगलाई त्यति सहज रूपमा लिएको पाइँदैन। विवाहपूर्व किशोर–किशोरीबीच सुरक्षित सेक्सका लागि कन्डम निकै महत्त्वपूर्ण भए पनि यो आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ। आधुनिक अभिभावकले यौन सम्पर्कलाई सुरक्षित बनाउन कन्डमले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
यौन सम्पर्कका क्रममा सही तरिकाले कन्डम प्रयोग गरेमा निकै प्रभावकारी (९७ प्रतिशत) हुन्छ। कन्डम गर्भनिरोधको साधन मात्र होइन। यसको उचित प्रयोगले यौन रोग, एचआईभी-एड्स एवं हेपाटाइटिसबाट पनि बचाउँछ। त्यसैले आफ्ना पार्टनरबाट यी संक्रामक रोग सर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा परिवार नियोजनका अन्य साधन अपनाइरहेको भए पनि कन्डम पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।
यौन सम्पर्कको बेलामा कन्डम फुट्न सक्छ भन्ने धारणा छ। सही तरिकाले भण्डारण गरी नबिग्रिएको र म्याद नगुज्रिएको कन्डम ठीक तरिकाले लगाइएको छ भने फुट्ने सम्भावना हुँदैन। एकथरी पुरुषहरूले कन्डमले यौन सम्पर्कमा आउने आनन्दमा कमी ल्याउँछ भन्ने गलत धारणा पालेको पाइन्छ। यो व्यक्ति–व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। कतिपय पुरुषले साधनबिना जति आनन्दको महसुस गर्छन्, कन्डमको प्रयोगमा तुलनात्मक रूपमा कम आनन्द महसुस गर्न सक्दन्। कन्डमको प्रयोगले लामो समय स्खलन हुन नदिने हुनाले कतिपयले भने लामो समयसम्म यौन सम्पर्कको आनन्द लिन पाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले शीघ्र स्खलन समस्या भएका एवं योनि सुक्खा समस्या भएकामा कन्डमको प्रयोगले फाइदै पुर्‍याउँछ। यसका साथै व्यावसायिक तवरमा किन्न पाइने डटेड वा बारयुक्त पातलो कन्डमले यौन आनन्द बढाउन मद्दत गर्छ।
पातलो खालको ल्याटेक्स रबरबाट निर्मित कन्डम सम्भोग गर्ने बेलामा उत्तेजित लिंगमा लगाइन्छ। थैलोजस्तै कन्डमको एकापट्टिको भाग खुला हुन्छ भने अर्कोपट्टिको भाग बन्द हुन्छ। बन्द भागमा अलि सानो टुप्पो हुन्छ, जसमा यौन सम्पर्कको समयमा स्खलित वीर्य संकलित हुन्छ। सम्भोगका क्रममा स्खलित पुरुषको वीर्यलाई महिलाको योनिमा झर्नबाट रोकी गर्भ रहनबाट बचाउँछ। यसरी कन्डमको प्रयोगले संक्रमित योनिरस वा वीर्यलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नदिने हुनाले यौन रोग एवं एचआईभी-एड्स रोगबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ।
कन्डमको सही प्रयोग
कन्डमको प्याकेटको एक छेउमा समातेर खुँडे भएको ठाउँतिरबाट नङको प्रयोग नगरी बिस्तारै प्याकेट च्यात्नुपर्छ। योनिमा पुरुष लिंग छिराउनुअगाडि नै कन्डम सुल्टो पारी राख्नुपर्छ। खतना नगरेको भए अग्रचर्म (लिंग ढाक्ने छाला) लाई पछाडितिर तान्नुपर्छ। लिंगको टुप्पोमा नफुकाइएको कन्डम राख्नुपर्छ। यसपछि कन्डमको टुप्पातिर रहेको हावा बूढी औँला र चोर औँलाले च्यापेर निकाल्नुपर्छ। कन्डम बिस्तारै फुकाउँदै उत्तेजित लिंगको टुप्पोबाट लिंगको फेदतिर लगाउँदै जानुपर्छ। यसरी कन्डम सुल्टो लगाएमा फुकाउँदै लैजान अप्ठ्यारो हुँदैन। यसको सट्टा कन्डम लगाउनुपूर्व नै फुकाएर लगाएमा लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुँदैन। यसरी सही तरिकाले कन्डम लगाइसकेपछि यौन सम्पर्कमा सरिक हुन सकिन्छ।
कन्डममा चिप्लो पदार्थ राखिएको हुँदा थप चिल्लो पदार्थ राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। थप चिल्लो पदार्थले कन्डम फुट्ने सम्भावना बढाउँछ। वीर्य स्खलन भएपछि लिंग शिथिल नहुँदै कन्डम नफुस्किने गरी राम्ररी समातेर योनिबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। कन्डमलाई विसर्जन गर्नुअघि फुटे-नफुटेको राम्ररी जाँच गर्नुपर्छ। यदि कन्डम फुटेको भए वा योनिभित्र नै अड्केमा आकस्मिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। योनि क्षेत्रमा वीर्य नपोखिने गरी, बिस्तारै कन्डमलाई लिंगबाट फुकाल्नुपर्छ, अनि प्रयोग गरिसकेको कन्डमको फेदलाई गाँठो बनाउनुपर्छ। प्रयोग गरिसकेको कन्डमलाई राम्ररी उचित स्थानमा विसर्जन गर्नुपर्छ।
कन्डम प्रयोग गर्नुअगावै फुटेको अथवा प्वाल परेको शंका लागेमा नयाँ कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, यौन क्रियापछि कन्डममा प्वाल परेको वा यसबाट वीर्य चुहिएको शंका लागेमा आकस्मिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। कन्डमको प्रयोगपछि लिंगमा चिलाउने समस्या भएमा कन्डममा प्रयुक्त रबरले हो वा यसमा रहेको चिप्लो पदार्थबाट हो, छुट्याउनुपर्छ। निश्चित ब्रान्डको कन्डमप्रति एलर्जिक भएको हो भने परिवार नियोजनको अर्को साधन छनोट गर्नुपर्छ।
कन्डमको प्रयोगका कारण यौन आनन्दमा कमी आएको महसुस भए व्यावसायिक तवरमा किन्न पाइने डटेड वा बारयुक्त पातलो कन्डमले यौन आनन्द बढाउन मद्दत गर्छ। हतारमा यौन सम्पर्क राखिँदै छ वा यौन सम्पर्क राख्न लागेको ठाउँमा यथेष्ट गोप्यता कायम भएन भने कन्डम लगाउनुअघि लिंग उत्तेजित बनाइराख्न समस्या आउन सक्छ। त्यसैले कन्डमको प्रयोगलाई स्वाभाविक रूपमा लिने, थोरै पानी मिश्रित ल्युब्रिकेन्ट प्रयोग गर्ने, यौनक्रियाअघि प्राक्क्रीडामा ध्यान दिने, पार्टनरलाई सघाउन लगाउने एवं पर्याप्त गोप्यता कायम गर्ने गर्नुपर्छ।
जाडोमा बदाम : कति स्वादिलो, कति पोषिलो ?
७५ वर्षको अध्ययनको निष्कर्ष : प्रेम नै खुशी हो